Backbone router, internal router စသဖြင့် Router type တွေကွဲသွားသလို၊ အဲဒီ router တွေက ပို့လွှတ်တဲ့ LSA type တွေလည်း ကွဲသွားပါတယ်။ ဥပမာ- ABR ဆိုရင် ဘယ်လို LSA တွေလွှတ်တယ်။ ASBR ဆိုရင် ဘယ် လို LSA တွေဆိုတယ်ပြီး ကွဲပြားသွားပါတယ်။ LSA Type 1 , type2စသဖြင့် ကွဲပြားသွားတဲ့ LSA အကြောင်း ဆွေးနွေးပါ့မယ်။ OSPF run နေတဲ့ router တစ်လုံးဟာ ဘယ်လို LSA တွေကို ပို့လွှတ်တယ်၊ ဘယ်လို LSA တွေ လက်ခံရတယ်ဆို တာ သူ့ရဲ့ router type , network type နဲ့ area type ပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ OSPF LSA Type တွေကတော့- Type 1 - Router LSA Type2- Network LSA Type3- Network Summary LSA Type4- ASBR Summary LSA Type5- External LSA Type6- ...
CCIE ဖြေခါနီးအတွက် စိတ်ဓာတ်ခွန်အားများ CCIE ဖြေတော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကို စိတ်ဓာတ်ကျအောင် လုပ်မယ့်သူတွေနဲ့ ဝေးဝေးနေပါ။ မင်းလား အောင်မှာ၊ အလကားပါကွာ စသဖြင့် စိတ်ဓာတ်ကျအောင်လုပ်မယ့်သူများနဲ့ ဝေးဝေးနေပါ။ ကျွန်တော် အတွက် registration လုပ်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာလည်း မလိုအပ်တဲ့အတွက် ဘယ်သူ့မှ မပြောပဲ နေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို အဓိက အားပေးကြသူများကတော့ ဆရာ ကိုဇေယျာဖြိုး၊ ဆရာ ကိုစိုင်းဥာဏ်လင်းဆွေ၊ ကိုနေခန့်ဇော်၊ကျွန်တော့်ဇနီး Dr စန်းသီတာဝင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။ CCIE ဖြေဖို့ သုံးရက်အလိုမှာ ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့အတူ စင်ကာပူကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ၇ရက်နေ့စာမေးပွဲဖြေပြိး၊ ၈ ရက်နေ့မှာ စင်ကာပူမှာ မိန်းမနဲ့လျှောက်လည်မယ်ပေါ့။ အကယ်၍ ၇ရက်နေ့အောင်ခဲ့ရင် ၈ရက်နေ့သည် ပျော်ရွှင်စရာနေ့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကျခဲ့ရင်တော့လည်း ဆိုပြီး အဆိုးဘက်ကနေပြင်ထားရပါတယ်။ ကျွန်တော့်မိန်းမနဲ့ ဆရာတွေကတော့ ကျတော့လည်း နောက်တစ်ခေါက်ပေါ့။ ဘာဖြစ်လဲ။ စာမေးပွဲအတွေ့ကြုံရတာပေါ့တဲ့။ ကြံဖန်ပြီး အားပေးတတ်သူတွေပေါ့။ စိတ်ထဲမှာ ယုံကြည်မှုလွန်ကဲနေတာပဲ ပြောရမလားပဲ။ မြန်မြန်ဖြေပြီး မြန်မြန် အဖြေကို သိချင်နေတယ်။ မိန်းမကို CCIE ကတော်လို့ ခေါ်ရင် သူကလည်း အားရပါးရ ရှင်လို့ထူးတယ်။ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေပေါ့ဗျာ။ နောက်တစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်ဘုရား၊ တရားကို ပိုပြီး လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ မရယ်ကြပါနဲ့။ ဘုရား၊ တရားကို အဓိဋ္ဌာန်နဲ့လုပ်လိုက်တော့ သမာဓိ ရပါတယ်။ ဒီသမာဓိက စာလုပ်တဲ့အခါ အထောက်ကူပြုပါတယ်။ နောက်ကုသိုလ်ရတာပေါ့။ အဲဒီလိုနဲ့ စာမေးပွဲဖြေဖို့ တစ်ရက်အလိုမှာ ဆရာကိုစိုင်းဥာဏ်လင်းဆွေရယ်၊ ကိုနေခန့်ဇော်ရယ် ကျွန်တော့်ကို စာကူပြီးလုပ်ပေးကြပါတယ်။ စာမေးပွဲ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေ ရှင်းပြကြပါတယ်။...
Network Engineer လုပ်ဖို့ လေ့လာနေတဲ့ ကျောင်းသားတော်တော်များကို CCIE ဖြစ်ချင်လား မေးကြည့်တဲ့အခါ CCIE ဖြစ်ချင်တဲ့ သူကသာ များပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း CCIE ဖြစ်ချင်လားဆိုရင် ဖြစ်ချင်တယ် လို့ပဲ ဖြေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် CCIE ဆိုတာ ကျွန်တော်နဲ့ လုံးဝမသက်ဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခု။ ကျွန်တော့်အတွက် မဖြစ်နိုင်တဲ့ အရာတစ်ခု လို့ပဲ မြင်ခဲ့ပြီး အိမ်မက်အဖြစ်လည်း မမက်ရဲခဲ့သလို၊ စိတ်ကူးအဖြစ်တောင် မယဉ်ရဲခဲ့ပါ။ ဘာကြောင့် CCIE ဟာ ကျွန်တော်နဲ့ အလှမ်းဝေးနေရတာလဲ? ဘယ်ကစလို့ ဘယ်လိုလျှောက်ရမယ်ဆိုတာတောင်မသိဖြစ်နေသူတစ်ယောက်အတွက် ဒီလိုတွေးတာ မဆန်းပါ ဘူး။ ကျွန်တော်ဝန်းကျင်မှာ CCIE တစ်ယောက်မှ မရှိခဲ့ပါဘူး။ Cisco က သင်တန်းတွေ သွားတက်တဲ့အခါ Cisco က CCIE တွေနဲ့ စကားပြောဖြစ်ပါတယ်။ သိချင်တာတွေ မေးလိုက်ရင် ဒိုးဒိုးဒေါက်ဒေါက်နဲ့ လက်တန်းပြီး ရှင်းပြကြလေ၏။ အလွန်အင်မတန် အားတက်မိပါတယ်။သူတို့လို ဖြစ်ချင်တဲ့ စိတ်တွေ တဖွားဖွား ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လမ်းပြမယ့်သူမရှိတဲ့ ခရီးသွားတစ်ယောက်အတွက် ဘယ်လမ်းဟာ လမ်းမှန်၊ ဘယ်လမ်းဟာ လမ်းမှားဆိုတာ မသိပဲ ခရီးသွားရတာ မလွယ်ကူပါဘူး။ ခရီးရဲ့ အကွာအဝေး၊ ခရီးရဲ့ အကွေ့အကောက်နဲ့ အဖြောင့်အတန်းကို မသိတဲ့ ခရီးသွားတစ်ယောက်လိုပါပဲ။ ဒါကြောင့် CCIE ဆိုတာ ကျွန်တော်နဲ့ ဘာမှမဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုလို မြင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ်အတွေးတစ်ခုက CCIE တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ငွေရေးကြေးရေးရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုလည်း သိန်းသုံးဆယ်ဝန်းကျင် ကုန်ကျစရိတ်ရှိပါတယ်။ တတ်နိုင်သူအတွက် မပြောပလောက်ပေမယ့် မတတ်နိုင်တဲ့သူအတွက် ဒါကလည်း...
OSPF Area Overview OSPF ဟာ ဧရိယာအယူဆကို သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် hierarchy and scalability အတွက် အများကြီး ကောင်း မွန်လာပါတယ်။ Distance Vector ဖြစ်တဲ့ RIP ရဲ့အားနည်းချက်တွေကြောင့် အသစ်အသစ်တွေ တီထွင်ဖို့ကြိုးစားရာကနေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ OSPF အတွက် စနစ်တစ်ကျရှိတဲ့ တည်ဆောက်ပုံနဲ့ Large Network အတွက် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် အလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်းတို့က RIP ရဲ့နေရာမှာ ကောင်းကောင်းနေရာလွှမ်းမိုးနိုင် တယ်ဆိုတာ သိသာပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဧရိယာအယူဆကို အသုံးပြုရသလဲ? LSA flooding domain ကိုခွဲခြားချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘာ ကြောင့် LSA Flooding Domain ကိုခွဲခြားချင်ရသလဲ? LSA Flooding domain တွေကွဲနေတော့ ဘာအကျိုးရှိ လဲ? ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့ အဖြေတွေကိုသိဖို့ Area သဘောတရား၊ LSA သဘောတရားတွေ နားလည်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် OSPF Area and LSA အကြောင်းဆွေးနွေးပါ့မယ်။ OSPF same Area ထဲမှာရှိနေတဲ့ device အားလုံးဟာ အဲဒီ ဧရိယာထဲမှာရှိတဲ့ Topology နဲ့ပက်သက်ပြီး အားလုံး သဘောတူညီမှုရှိရပါတယ်။ အကယ်၍ ကိုယ့်ဧရိယာထဲမှာ အပြောင်းအလဲတစ်ခုခု ဖြစ်ပြီဆိုပါစို့။ အဲဒီအပြောင်း အလဲကို same area ထဲမှာ ရှိတဲ့ device အားလုံးကို အသိပေးဖို့ LSA ကိုအသုံးပြုရပါတယ်။ LSA ပို့ပေးရပါ တယ်။ အဲဒီအတွက် SPF...
Read OSPF – Part 1 (Overview) here အဆင့်တစ်- OSPF neighbor ကိုရှာပါတယ်။ ပြီးရင် topology information တွေကို အချင်းချင်း ဖလှယ်ကြပါတယ်။ သူသိတဲ့ topology information တွေ ကိုယ့်ပေး၊ ကိုယ်ကလည်း ကိုယ်သိတဲ့ topology information တွေ သူ့ကို ပြန်ပေး စတာတွေ လုပ်ပါတယ်။ အဆင့်နှစ်- SPF ကနေတစ်ဆင့် အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်ပါတယ်။ အဆင့်သုံး- Neighbor နဲ့ Topology Table Information တွေကို maintenance လုပ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်သုံးဆင့်ကို နည်းနည်းချဲ့ပြီး လေ့လာကြည့်ရအောင်- အဆင့်တစ် – Neighbor & Topology Discovery OSPF run နေတဲ့ router တစ်လုံးကို power on လိုက်ပြီဆိုပါစို့။ OSPF enable လုပ်ထားတဲ့ interface ကနေစပြီး hello packet လွှတ်ပါတယ်။ ဘာအတွက် hello packet လွှတ်သလဲဆိုတော့ သူ့လိုပဲ OSPF run ထားတဲ့ neighbor တွေကို ရှာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ OSPF ကသုံးတဲ့ IP protocol number က 89 ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စတွေကို လက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါ ပိုပြီး ကျေကျေနပ်နပ် နားလည်ဖို့ wireshark နဲ့ capture လုပ်ပြီး ရှင်းပြပါ့မယ်။ hello packet ကို ပို့လွှတ်ဖို့ multicast...
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ မိမိနဲ့သင့်တော်လား၊ မသင့်တော်လား မိမိကိုယ်တိုင် စဉ်းစားတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ တစ်သက်စာ လျှောက်လှမ်းဖို့ ရည်မှန်းထားတဲ့ လမ်းရဲ့ အကွေ့အကောက် အဖြောင့်အမတ် စတာတွေကို မလျှောက်လမ်းခင်က သိထားနှင့်လျှင် တကယ်လျှောက်လှမ်းဖို့ သင့်တောာ် မသင့်တော် ပိုမိုမှန်ကန်စွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်တစ်ခုကို တခြားသူရဲ့ တိုက်တွန်းမှုကြောင့်သော်လည်းကောင်း ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်သော်လည်းကောင်း ရွေးချယ်ပြီးမှ စိတ်မ၀င်စားတဲ့အခါ စိတ်ဝင်စားမှု ကျဆင်းပြီး အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်၊ ပျော်ရွှင်သင့်သလောက် မပျော်ရွှင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လမ်းခုလတ်ရောက်မှ နောက်ပြန်ဆုတ်တာတွေကြောင့် ရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေ၊ ငွေတွေ စတာတွေအတွက်ပါ နှမြောဖို့ ကောင်းပါတယ်။ IT ပညာရပ်ဆိုတာကလည်း ပြောရင်သာလွယ်တာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖြစ် ရွေးချယ်တဲ့အခါ ရွေးစရာတော်တော်များပါတယ်။ အကြမ်းအားဖြင့်ပြောရရင်. Network Engineer လုပ်ချင်တာလား? System Engineer လုပ်ချင်တာလား? Security Engineer လုပ်ချင်တာလား? App Dev လုပ်ချင်တာလား? စသည်ဖြင့် လမ်းခွဲတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒါတောင် အသေးစိတ် ပြန်မခွဲရသေးပါဘူး။ ဘယ်လမ်းက ကိုယ့်အတွက် သင့်တော်မလဲ၊ ဘယ်လမ်းက ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတာလဲ၊ လမ်းတစ်ခုချင်းစီမှာ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမယ့် အကောင်း အဆိုး စတာတွေ သိမြင်ပြီး စဉ်းစားနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကျနော်တို့ Network လုပ်နေတာအဆင်ပြေလို့ အားလုံး Network လုပ်ရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။ IT နယ်ပယ်မှာ ပညာရှင်တွေ အားလုံးလိုအပ်ပါတယ်။ Network ဆိုတာက Data တွေကိုတစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကို သယ်ပေးဖို့ပါ။ Data...
Scroll down for Unicode Version အရင် Blog Post မှာရေးခဲ့တဲ့အတိုင်း Certification များဟာ IT လုပ်ငန်းမှာ အလွန်ပင်အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လဲ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာမှမသိရင်နေပါစေ Certificate တော့ရအောင်ယူလိုက်အုံးမယ် ဆိုသူတွေများလာပါတယ်။ ထိုသူများကို Paper Certified Engineer များဟု IT လုပ်ငန်းခွင်မှာ ခေါ်ကြသည်။ အချို့သော လုပ်ငန်းရှင် သို့မဟုတ် မန်နေဂျာ များကလည်း Business ကိုသာနားလည်ပြီး Technical ပိုင်းတွင်မကျွမ်းကျင်သောကြောင့် ထိုသူများကို အားကိုးတကြီးဖြင့် အခြားသူများထက် လစာပိုပေးကာ အလုပ်ခန့်တတ်ကြပါတယ်။ အလုပ်ခန့်ပြီးကာမှ ပြဿနာ မျိုးစုံနှင့် ကြုံတွေ့ရပါတော့သည်။ Paper Certified Engineer များသည် မိမိကိုယ် မိမိ ယုံကြည်မှု နည်းတတ်ကျပါတယ်။ Technical ဆွေးနွေးမှူ များထဲတွင်လည်း မပါဝင်တတ်ကြပါ။ မလွှဲရှောင်သာလို့Technical အရ Challenge လုပ်ခံရင်လည်း ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်ကာ ငြင်းခုံဆွေးနွေး မှုများမပြုလုပ်နိုင်ကြပါ။ Customer နှင့် Team Member များက Company ကို Complain တတ်သည်များလည်း ဖြစ်တတ်ပါသေးသည်။ အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကလည်း နောက်ကွယ်တွင် မကောင်းပြောဆို အထင်မကြီးကြပါ။ ထိုသူများသည် အလုပ်တွင် နေရာမရတတ်ကျပဲ အချိန်အပိုင်းအခြား တစ်ခုပြီးပါက အများအားဖြင့် Technical အရ Challenge မဖြစ်သော အလုပ်ခွင်သို့ပြောင်းရွှေ့ သွားတတ်ကျပါတယ်။ Paper Certified Engineer များနှင့် ဆန့်ကျင်ဖက်မှာတော့ Real Certified Engineer တွေရှိပါသည်။ ထိုသူများသည် သူရရှိထားသော...
Scroll down for Unicode Version. “Certificate တွေက အရေးမကြီးပါဘူး။ တကယ်တတ်ရင် တကယ်တော်ရင် ဘာမှကြောက်စရာ မလိုပါဘူး” အပေါ်က စကားမျိုးကို အတွေ့အကြုံရှိပြီးသား IT Professional တရောက်ဆီကနေ ကြားဖူးပါသလား? ဒါလဲမှန်သင့်သလောက် မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ ကိုယ်ကအဆက်အသွယ် မကောင်းရင်၊ ကိုယ့်ကိုသိတဲ့လူမရှိရင် Agency တွေ HR တွေကို ကျော်ဖို့တောင်မလွယ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Company တစ်ခုက Vacancy တစ်ခု ကြော်ငြာလိုက်ပြီဆိုရင် လာလျှောတ်တဲ့သူ ရာဂဏန်း ရှိတတ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကို တစ်ခုချင်း စီစစ်ဖို့ မတတ်နိုင်တော့ Agency တွေ HR တွေက သတ်မှတ်ရလွယ်ကူတဲ့ စံနှုန်းတွေ သုံးလာပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ပညာရေး ၊ အလုပ်အတွေ့အကြုံတွေ အပြင် ၊ Certificate တွေလဲပါပါတယ်။ စစ်ဆေးပြီး စံနှုန်းမှီတဲ့သူ တွေကိုပဲ Hiring Manager တွေဆီ Interview စီစဉ်ပေးတာ များပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အလုပ်ရဖို့ဆိုတာ Interview ရဖို့လိုပါတယ်။ Certificate ရှိထားရင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Interview ရဖို့အခွင့်အရေး ပိုများပါတယ်။ “ကျနော်အလုပ်ရှာနေတယ် မလွယ်ဘူးဗျ သူတို့က အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားလူပဲ လိုချင်တယ်” သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေဆီက ကြားဖူးပါသလား? ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ဖူးပါသလား? တွေ့ကြုံဖူးကြားဖူးတယ် ဆိုရင် ဒါဟာ သင်တစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်ပါဘူး။ “အလုပ်မရလို့ အတွေ့အကြုံမရှိ ၊ အတွေ့အကြုံမရှိ.လို့ အလုပ်မရ” ။ IT နယ်ပယ်မှာ ဒါဟာပုံမှန်...
Scroll down for Unicode Version. “A lot of people who are proficient in other IT specialties think they can configure the routers withalittle help of good uncle Google and free support from fellow bloggers” – Ivan Pepelnjak အရင်ဆုံး Ivan Pepelnjak ဆိုတာ ဘယ်သူလဲပြောပြချင်ပါတယ်။ Network လောကမှာ အလွန်ကို နာမည်ကြီးတဲ့သူ တစ်ယောက်ပါ။ Network သမားတွေသာမဟုတ်ပဲ တခြား IT Infrastructure Professional တွေ Visualization, System နဲ့ Storage သမားတွေကပါ လေးစားရတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ISP က Network Technology တွေကို လေ့လာဖူးသူတွေ ကတော့ သူ့စာအုပ်ကို ဖတ်ဖူးကျပါလိမ့်မယ်။ MPLS and VPN Architectures Vol I and II ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Website ဖြစ်တဲ့ http://www.ipspace.net မှာလည်း Network and Datacenter နဲ့ဆိုင်တဲ့ Blog Post တွေ ၊ တခြားအသုံးဝင်တဲ့ Information တွေကိုရှာဖွေတွေ့နိုင်ပါတယ်။ သူပြောခဲ့တာကတော့ တခြား IT Professional...